ဘာကြောင့် Epublibre အလုပ်လုပ်နေတာလဲ။ ဒီရွေးချယ်စရာထွက်စစ်ဆေးပါ Gadget သတင်း
အကယ်၍ သင်သည်စာအုပ်ဖတ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်သည် Epublibre ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုသူလည်းဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်၊ အွန်လိုင်းအခမဲ့စာအုပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာများ။ ဤစာမျက်နှာကို ၀ န်ဆောင်မှုမရှိဘဲရှာဖွေခြင်းသည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးစာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခေါင်းစဉ်နှစ်ခုလုံးကိုကိုင်တွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခု Epublibre ဆင်းကြောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခြားနည်းလမ်း၏ထောက်ခံချက်.
၀ က်ဘ်ပြိုလဲသွားသည့်အခါများ၌ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ပြtheနာမှာကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်ခြင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်နေ့လည်ခင်းကိုတာဝန်ရှိစွာဖတ်ရန်အချိန်ဖြုန်းမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခုတော့ငါတို့ဟာကြီးလေးတဲ့ပြproblemနာကိုရင်ဆိုင်နေရပုံရတယ်။ ကျနော်တို့ကအစားထိုးဖို့အရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုအခြားနည်းလမ်းပြန်လည်သုံးသပ်သွားကြသည်သူတို့ထဲကတချို့ဟာအရမ်းကောင်းတယ်၊ Epublibre ကမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်ရင်တောင်မှတချို့အတွက်တော့အဲဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်တယ်။
1 ဒါပေမယ့် ... Epublibre ကဘာလဲ၊
1.1 Epublibre catalog ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
2 Epublibre သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာချွတ်ယွင်းနေပြီး၎င်းသည်ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မည်လား။
3 Epublibre ကိုဖွင့်ထားရင်တောင်သုံးလို့ရလား။ နည်းလမ်းရှိသော်လည်းကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။
4 Epublibre မှအခြားရွေးချယ်စရာများ
4.5 Google ကစာအုပ်များ
ဒါပေမယ့် ... Epublibre ကဘာလဲ၊
အချို့သောရံဖန်ရံခါစာဖတ်သူများအတွက်သို့မဟုတ်သူတို့၏ဘ ၀ တစ်သက်တာလုံးကိုစက္ကူပေါ်တွင်ဖတ်ရှုခဲ့ကြသောတည်ကြည်ခိုင်မာသည့်စာဖတ်သူများအတွက်ပင် Epublibre သည်မည်သည့်အရာကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသွားပါမည်။ ဤစာမျက်နှာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းကအင်တာနက်ပေါ်တွင်တင်ထားပြီးစာအုပ်စာပေအမြောက်အမြားကိုစုဆောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးသတင်းများမှနောက်ဆုံးကျသည့်ဆောင်း ဦး ရာသီမှအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်လျှင်စာအုပ် ၄၁,၇၅၆ ထက်နည်းသောစာကြည့်တိုက်နှင့်အခြားစာအုပ် ၁၂၀ နီးပါးပြင်ဆင်နေကြောင်းတွေ့နိုင်သည်။ စာကြည့်တိုက်သည်အဓိကအားဖြင့်စပိန်ဘာသာဖြင့်ခေါင်းစဉ်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ သို့သော်ကျွန်းဆွယ်၏တရားဝင်ရုံးသုံးဘာသာစကားများဖြစ်သော Valencian, Galician, Euskera သို့မဟုတ် Catalan စသည့်စာအုပ်များစွာကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Epublibre catalog ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုလက်ခံရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်မှတ်ပုံတင်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ခံခြင်းမပြုမီကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနိုင်သောရှည်လျားသောစောင့်ဆိုင်းစာရင်းသို့ဝင်ရောက်ရပါလိမ့်မည်။
ဝဘ်၏အအောင်မြင်ဆုံးဝက်ဆိုက်တွင်၎င်းတွင်၎င်းသည်၎င်း၏အဖုံးမှအပြည့်အဝလက်လှမ်းမီသည့်အပြင်အဆင်စာအုပ်များအတွက်လက်စွဲစာအုပ်ရှိသည်။ စာအုပ်များထုတ်ဝေရန်နှင့်တည်းဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရမည်။ ဒါပေမယ့်စာအုပ်တွေကူးယူရန်အကြွင်းမဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်မည်သူမဆိုစာအုပ်များကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်ရယူနိုင်သည်။
Epublibre စာအုပ်များအားလုံးသည် ePub ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့ကိုအခြားပုံစံများဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ePub အမျိုးအစားသည်စာအုပ်ဖတ်သူများသို့မဟုတ် Ereaders အများဆုံးအသုံးပြုသောပုံစံဖြစ်သည်အချို့သောစမတ်ဖုန်းများ (သို့) ကွန်ပြူတာများတွင်ဤအမျိုးအစားကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းင်း၏ပြားများ၏အပြာရောင်အလင်းကြောင့်၎င်းသည်မျက်လုံးအလွန်အမင်းငြီးငွေ့ဖွယ်မရှိချေ။ download လုပ်ရန် torrent downloads အတွက်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ရန်လိုသည်။
အမှန်မှာ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ဘရောက်ဇာမှဝက်ဘ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါကယနေ့ Epublibre ကိုလက်လှမ်းမမှီနိုင်ပါ၊ အလားတူအခြေအနေမျိုးကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတိုးချဲ့ခြင်းသည်ပထမဆုံးမဟုတ်ပါ၊ Epublibre သည်အကြိမ်များစွာသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်သို့သော်သူမထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာကျဆုံးခြင်းခံစားခဲ့ရကတည်းကရှည်လျားသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မင်းပြန်နိုင်လား ဆက်ဆက်ပြန်လာနိုင်ပါတယ်သင်၏ဒိုမိန်းသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုနှင့်ဖြစ်စေ။ အရာရာတိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အား ၁၀၀% လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကွန်ရက်မတိုင်မှီကျွန်ုပ်တို့ကိုရှာရန်အချိန်တန်လျှင်ဆက်လက်နှောင့်နှေးနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ပြproblemနာကသတင်းမှားတွေအုပ်ချုပ်နေတယ် Epublibre တွင်လူမှုရေးကွန်ရက်များ၌တရားဝင်အကောင့်မရှိပါထို့ကြောင့်၎င်းသည် developer များထံမှမည်သည့်ဆက်သွယ်မှုမျိုးကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့မရနိုင်ပါ။
ကျဆုံးပြီးသော အချိန်မှစ၍ အချို့သောတွစ်တာအကောင့်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းတို့သည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှသတင်းအချက်အလက်အချို့ရရှိနိုင်သည့်“ တရားဝင်” အကောင့်တစ်ခုမှာ Epublibre hosting ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းရန်တာ ၀ န်ရှိသူဖြစ်ပြီးသူ၏အကောင့်တွင်သူကသတင်းများကိုထုတ်ဝေနေခြင်းဖြစ်သည်။
တိကျတဲ့အကောင့်ဖြစ်ပါတယ် @TitivillusEPL တွင်နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များအရ Epublibre အားပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ငါဆိုသည်ကား လက်ရှိဆိုင်းငံ့ထားသည်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တွစ်တာပရိုဖိုင်းဒါမှမဟုတ်စာပေတွေကိုကြည့်လို့မရဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မသိရသေးသော်လည်း၊ အကောင့်အားတွတ်တာမာတာမှပိတ်ပင်ထားသည်
Epublibre ကိုဖွင့်ထားရင်တောင်သုံးလို့ရလား။ နည်းလမ်းရှိသော်လည်းကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။
၎င်း၏လက်ရှိပြည်နယ်အတွက် Epublibre ဝင်ရောက်ဖို့နည်းလမ်း။ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခေါ်သည် archive.org ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်သူတို့အကြောင်းအရာများကိုမဆုံးရှုံးစေရန်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်မရရှိနိုင်ပါသောဝက်ဘ်ဆိုက်များသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် နှင့်ဤကိစ္စတွင်ကဲ့သို့သူတို့သည်နောက်တဖန်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
archive.org ရှိသင်၏လိပ်စာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဝက်ဘ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်အရေးကြီးသောကန့်သတ်ချက်များဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသေးသောအကြောင်းအရာများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ င် ရောက်၍ မရနိုင်ပါ archive.org မှာ။ archive.org သည်အခါအားလျော်စွာအရန်တစ်ခုပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းတို့ထဲမှစာမျက်နှာ၏နောက်ဆုံးတင်ခြင်းများဖြစ်သည်။ ဒါဟာမပြည့်စုံပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးခွင့်ရလိမ့်မယ်။
စာအုပ်အမျိုးမျိုးကိုဖတ်ရန် Epublibre အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်မည်။ အများစုသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်အချို့မှာအဓိကစာရင်းပေးသွင်းခြင်းအချို့ရှိနိုင်သည်။
အချိန်ကာလ၏အကျော်ကြားဆုံးအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်နှင့်ဆိုင်အားလုံး၏မိခင်စတိုးဆိုင်အပြင်၊ အကောင်းဆုံးအရောင်းရဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလည်းရှိသည် (ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံး)၊ ၎င်းသည်၎င်း၏အားသာချက်များအနက်စာအုပ်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိခြင်းသည် သငျသညျအဓိကအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားဖြင့်စာပေဂရုပြုမှုဖြစ်သောဥပမာ Cervantes, Lorca သို့မဟုတ် Miguel Hernandez မှစသည်တို့ဖြစ်သည်။ စပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသောနိုင်ငံခြားအလုပ်များကိုသူတို့၏မူရင်းဘာသာစကားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
သင်၏အဓိကစာရင်းပေးသွင်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဤကမ်းလှမ်းချက်များအပြင် Amazon သည်သင်အသင်း ၀ င်မဟုတ်သော်လည်းများစွာသောစာအုပ်များကိုလည်းပေးထားသည်။ တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၆ ဖြစ်သည် ငါဒီဟာအရမ်းကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ထင်တယ်၊ ဒီစာအုပ် ၀ န်ဆောင်မှုအပြင်စတိုးဆိုင်ထဲမှာပါ ၀ င်တဲ့ဗီဒီယိုအပါအ ၀ င်တခြားများစွာလည်းရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ရန်အရည်ရွှမ်းသောအထူးလျှော့စျေးရရှိပါမည် Kindle Paperwhite ကျွန်တော်တို့ ActualidadGadget မှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးပြီ။
ဆောင်းပါးမှာအရင်ကဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းငါတို့ပြောပြီးပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက Epublibre ကိုဖွင့်လို့မရတဲ့အချိန်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးရှာတွေ့နိုင်ပါတယ် စပိန်လိုစာအုပ်ပေါင်း ၁၈၀၀၀။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိစာအုပ်များကိုဘာသာစကားများစွာဖြင့်ပေါင်းမည်ဆိုလျှင်၊ ကျနော်တို့စုစုပေါင်းစာအုပ် 1,4 သန်းပေါင်းထည့်ပါ။ အကြောင်းအရာနှစ်ခုလုံးကိုအလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်ပါတယ် PDF ဖိုင်ရယူရန် como ePUB, ကျွန်တော်တို့ကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားသမျှသောသူတို့အားခေါင်းစဉ်။
ဒါဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးယဉ်ကျေးမှုအရင်းအမြစ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Epublibre ဟာအသုံးမ ၀ င်တော့တာကိုအခုထောက်ခံနေတုန်းပါ။
ဒီကိုနှိပ်ပါ Enlace ရယူရန်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်တော်တစ် ဦး အကြံပြုလိမ့်မယ် လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းအောက်တွင်ပေးဆောင်ဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့ရှိသည်ပေမယ့် ရက်ပေါင်း 30 အဘို့မတိုင်မီကြိုးစားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ဤစာရင်းပေးသွင်းထားမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားစာဖြင့်ရေးသားထားသောစာအုပ် ၁၀၀၀ ကျော်နှင့်အလွန်များပြားသောအော်ဒီယိုစာအုပ်များအပြင်မျက်စိကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများသို့မဟုတ်ဆိုဖာပေါ်တွင်အနားယူနေစဉ်သို့မဟုတ်အနားယူနေစဉ်အတွင်းနားထောင်လိုသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုကိုပေးထားသည်။
ထိပ်တန်းရောင်းသူများ၊ ဂန္ထဝင်များနှင့်အသစ်အဆန်းများအကြောင်းခေါင်းစဉ်များကိုအုပ်စုဖွဲ့ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လျှောက်လွှာရှိသည် iOS ကို နှင့် Androidထို့ကြောင့်ဤ operating system များရှိ device တစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်လိုပါကအလွန်အဆင်ပြေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပိုက်ဆံပေးရခြင်း၏အားသာချက်များစွာအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် Netflix of books ဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ: Vi-Da Tec LLC မှ
ဖတ်၊ လေ့လာ၊ ကြီးပွားသည်။ ၎င်းကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲထားသည်။ «အကြံပြုထားသောစာအုပ်များ», « PDF ဖြင့်စာအုပ်များနှင့်စာသားများ» y «သင်၏စာဖတ်စွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်အရင်းအမြစ်များ»စာအုပ်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများ။ လိုင်စင်ရစာအုပ်များနှင့်ပစ္စည်းများကိုအခမဲ့ရယူပါ Creative Commons (ယဉ်ကျေးမှုများလက်လှမ်းမီခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်း) ။
စာဖြင့်ရေးသားထားသောယဉ်ကျေးမှုတွင်ပါ ၀ င်သောအခြားကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာ Google ဖြစ်သည်။ မရေမတွက်နိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုထူးကဲစွာပေးနိုင်သည့်အပြင်၎င်းတွင်ကြီးမားသောအီလက်ထရောနစ်စာအုပ်စာကြည့်တိုက်ရှိသည်။ ငါတို့တစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ် စပိန်အပါအဝင်မည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်မဆိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့်စာအုပ်အမြောက်အမြား.
စာအုပ်များအပြင်မဂ္ဂဇင်းများနှင့်သတင်းစာများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ကမ်းလှမ်းမှုမှာအလွန်ကွဲပြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရံဖန်ရံခါတစ်ခုခုဖတ်လိုပါက၎င်းသည်အလွန်ခိုင်လုံသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်ကစာဖတ်ခြင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းကိုအဓိကရင်းမြစ်အဖြစ်မအကြံပြုပါ။ အများဆုံးဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်မရနိုင်ကတည်းက။
မင်းရဲ့ဝါသနာကစာအုပ်တွေဖတ်နေရင်ငါနှိမ့်ချစွာမြင်တယ်၊ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ Amazon မှ Kindle e-book ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတွင်မျက်စိကိုရန်မလိုသောနည်းပညာရှိသည့်ပြားများရှိသည်။ နှင့်မျှမျှတတပါရှိသောစျေးနှုန်း ငါ Amazon ချုပ်စာရင်းပေးသွင်းရန်အကြံပြုလိုပါတယ်သင်၏စာအုပ်၌အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (သို့) စီးရီးများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုပါ ၀ င်သော Premium video service ကဲ့သို့သောအကြီးဆုံးစာအုပ်စာကြည့်တိုက်များအနက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးလိမ့်မည်။
သင်ထင်လျှင် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » စာဖတ်သူများ » ဘာကြောင့် Epublibre အလုပ်လုပ်နေတာလဲ။ ဤရွေးချယ်စရာများကိုစစ်ဆေးပါ
link ကိုပို့ပေးတဲ့အတွက်အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာမျက်နှာ Marianito ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှုတ်ဆက်ခြင်း